Ma Your Online Social Taariikh nololeedka Wrecking Xiriirka Your?
Waxaad ogaan kartaa in aad qofka keliya obsessively baadhaa taariikhaha ay ku social media sites iyo matoorada search isagoo isku dayaya inuu qodo ilaa wasakh aadan, xaq u? Ma taqaan waxa raad Internet aad waxaa ku yidhaahdeen adiga kugu saabsan in xiriirka mustaqbalka?
Saamiga Friend The
Just sida badan cas oo calamada laga yaabaa in aad sida macquulka ah la kor u saaxiibadaa iyo liiska Socotay? Waxaa laga yaabaa in ka badan inta aad u malaynayso. Mid ka mid ah xubnihii ugu heli karo macluumaadka adiga kugu saabsan, ugu yaraan marka ay timaado internetka, waa kuwa ay yihiin saaxiibadaa yihiin. Taariikhaha la fili karo in lagu raadin karaa liiska iyo sameynta qaar ka mid ah fikradaha xoogan.
Haddii aad si degdeg ah u eeg liiska ka mid ah asxaabta, isku waslad ka mid ah macluumaadka la isla markiiba nuugo doonaa: ratio dadka in ay haweenka liiska. Haweenka leh saaxiibbo farabadan oo lab noqon kartaa hanjabaad ah in taariikhaha iman kara. Waxay tahay in la yaabanahay oo dhan raggani yihiin, waxa xiriirka waa, iyo haddii ay suurtogal dareemo in halis. Waxaa la mid ah haweenka waxaa hubinta niman warbaahinta bulshada oo. Marka ay arkaan wax badan oo ka mid ah haweenka ku jira liiska, ay u socoto in uu si gundheer iyo taxadar dheeraad ah.
The Info waxaad Muujinaysaan
Warbaahinta bulshada waa hab wanaagsan oo ku sii dabajiraan oo la filayo inuu isku xiro dad aad ku raaxaysato, laakiin waxa uu sidoo kale ka buuxsamay mowduucyo kulul-button. Dad badan ayaa u isticmaali bogagga warbaahinta bulshada si ay raacaan sababaha siyaasadda iyo bulshada in iyaga khuseeya. Qaar ka mid ah xitaa waxa ay isticmaalaan sida soapbox ah in tout danaha xayawaanka ay. Fikradaha Strong noqon karaa mid aad u off-gelinaya in taariikhaha iman kara, kuwaas oo laga yaabo in aanay kal iyo laab ah raacsan tahay arin kasta.
Ma aha mid wanaagsan in la helo saaxiibkiisa ah oo kuu ogolaado on arrin kasta hal, oo mar walba wanaagsan in ay maskaxdaada furan. Marka aad Duqeynta saaxiibkiisa ka iman kara adiga iyo danaha siyaasadeed, aad noqon kartaa iyaga oo deminta oo iska riixaya ka hor inta aadan xitaa waxa ay fursad u heli lahayd dhulka caadiga ah.
The Codsiyada Waxaad Samee
The laba idinka mid ah ayaa lagu shukaansi muddo wiig ah, waana ay fiican yihiin. Laakiin ka hor inta aad shanlada iyada oo ay saaxiibo liiska iyo Duqeynta dhamaan xubnaha qoyskooda iyo kuway isbarteen la codsiyada, joojiyo una fikiro. Ma ahan ku haboon in saaxiib walaalaha ay, waalidka iyo saaxiibada dugsiga sare haddii aad si cad idan u weydiistaan ​​in sidaas la sameeyo.
Samee ka dambeeya dhabarka saaxiibkiisa ama ay heshiis la'aan, oo waxaad dabaysha laga yaabaa eegay sida dabasocodka ah. Xataa marka niyaddu waa mid aad gebi ahaan aan waxba galabsan, Waxa ay shaki leh haddii si lama filaan ah aad friending dhamaan saaxiibadood. Qofka aad shukaansi dareemi doontaa in aad isku dayaya in ay ka warhaysaa oo iyaga ku, oo taasi way kicin lahaa dhammaan noocyada kala duwan ee arrimaha trust.
The Sawirro Waxaad La wadaag
Waxaad dieted xilliga qaboobaha oo dhan iyo hadda aad eegto yaab leh in brand-cusub xirtaan dhar-in ... laakiin in micnaheedu ma aha waa inaad dunida wadaagaan. Alaabtii waxaad Muujinaysaan in sawiro aad la siinayo laga yaabaa off aragti qaldan oo ku saabsan nooca qofka aad tahay. Tusa badan oo maqaarka, iyo saaxiibkiisa iman kara noqon karta masayr ah. Waxay waayi kartaa ixtiraam aad u. Xitaa Waxay tusin karnaa sawiro aad dadka kale, ama iyaga oo dib-u-soo daabacnaa oo waxaa iyaga la dunida ka wadaagaan, marka aad ahaayeen oo kaliya ay doonayaan inay la yar oo la doortay wadaagaan pics ah.
Marka aad gelin wax on internetka, qof ka heli kartaa waxayna dadkoo dhan soo dhisi doono fikrado wax ku saabsan. Xusuusnow in ka hor inta aadan is tusayo xirtaan dhar-shot in.
Is ogow in sida aad u soo bandhigaan naftaada goobaha warbaahinta bulshada. Idinkuna ma waxaad doonaysaan inaad daaha ka qaaddid oo aad u badan. Sawir Taasi goofy idinka mid ah oo aad jeclaan meesha aad ka soo gudbay oo sariirtay laga yaabaa horseedaya Xusuus weyn aad u, laakiin maalinta ka iman kara waxay noqon kartaa calanka gaduudan weyn. Marna ma heli karaan fursad ay ku sharxaan dhaqanka in sida uu yahay si fiican ee la soo dhaafay.
Tus shakhsiyadda online, laakiin tusin version ku sifeeyay. Waxaad rabtaa in aad saaxiibkiisa ah oo wuu idin jecel yahay, waayo, kuwaas oo run ahaantii aad ka yihiin, oo waxaad heli doontaa fursado badan oo ay daaha ka layers badan oo aad. Ma aha in aad si deg degin si ay u muujiyaan ka bixinyaan oo dhan ee internetka.